Chautari Daily » भद्रगोल
काठमाडौं /भद्रगोल निकै चर्चित टेलिसिरियल हो । टेलिभिजनमा र युट्युबमा भद्रगोल लाई दर्शकले निकै रुचाएका छन् । तर केही हप्तादेखि भद्रगोल प्रशारण भैरहेको छैन । भद्रगोल को प्रशारण रोकिएसँगै फ्यानहरुले गाली गरिरहेका छन् ।
भद्रगोल का निर्देशक दिपक आचार्य ले भद्रगोल रोकिनुको कारण खुलाएका छन् । उनले नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु भएसँगै आफूहरुले विभिन्न विज्ञापन र मिडिया हबसँग सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका छन् । अहिलेसम्म उक्त सम्झौता नभएर भद्रगोल को प्रशारण रोकिएको उनको भनाई रहेको छ ।
उनले सबै कुरा मिल्ने बित्तिकै भद्रगोल पुन ः सुचारु हुने पनि बताएका छन् । अहिले भद्रगोल का कुनैपनि श्रृङ्खला छायांकन भएको छैन । मिडिया हबसँग सम्झौता भएपछि मात्र विभिन्न एपिसोडहरु छायांकन हुने दिपकले जानकारी दिएका छन् ।
प्रकाशित मिति २१ श्रावण २०७६, मंगलवार ०७:२१
मलेसियामा बच्चा जन्माएर प्लाष्टिकमा राख्ने नेपाली महिला पक्राउ
गायक प्रशान्त तामाङको मृत्युको खबरबारे यसो भन्छिन पत्नी मार्था!
टिकटक बनाउँदा सेती नदीमा खसेकी प्रवित्राको श’व यस्तो अवस्थामा भेटियो ( हेर्नुहोस् )
टिकटक बनाउँदा सेती नदीमा खसेकी प्रमिलाको श’व यस्तो अवस्थामा भेटियो ( हेर्नुहोस् )
आज अमेरिकी डलर सहित केही देशको मूल्य बढ्यो, हेर्नुहोस कुन देशको कति पुग्यो ?
स्टुडियोमा यसरि गीत रेकर्डिङ हुन्छ विष्णु माझीको ( भिडियो हेर्नुहोस् )
विवाह गरेको एक वर्ष नपुग्दै रोजिनाको रहस्यमय निधन,आमालाइ फोन गरेर यस्तो भनेकी रहेछिन।